မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 245
Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ နေ့ခင်းက မီးလောင်ကျွမ်းနေသော ဂျယ်ဂေါင်မြို့ ဆိုင်ကယ်ဂိုဒေါင်တန်း ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်က တရုတ်...
တာရာဝေယံ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ မိတ်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပွဲကို ဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြစ်သာရပ်၊ သံသုမာ လမ်းနဲ့ ရတနာလမ်းထောင့် လိုင်စင်ရုံးအနီးက စိတ်တိုင်းကျ စားရိပ်မြုံ ဒုတိယထပ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Magin...
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၂၂၀၀၈ ခုနှစ်က အီရတ်တွင် တွေ့ရသော David Petraeus (ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်) နှင့် အိုဘားမား (ထိုစဉ်က လွှတ်တော်အမတ်) ပထမ အမေရိကန်က...
၀န်ထမ်းလစာတိုးရန် သူရဦးရွှေမန်း အဆိုတင် – enough salaries and allowence!
Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေသော သူရဦးရွှေမန်း (ဓာတ်ပုံ-MNA) ၀န်ထမ်းများ၏ လစာကို လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မဖြစ်မနေတိုးမြှင့်ပေးရေး၊
ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် NLD ရုံး ဆိုင်းဘုတ်​တင်ပွဲ၊ ရုံးခန်းဖွ​င့်ပွဲတို့ကို ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေသခံ နိုင်ငံရေးသမား အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံများ –...
ဒေါ်စု၏ ပုသိမ် မြောင်းမြ ခရီးစဉ် ပရိသတ်များစွာကြိုဆို – Daw Suu in Irrawaddy Division
by Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ပုသိမ်မြို့တွင် ပုသိမ်ထီးနှင့် တွေ့ရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဓာတ်ပုံသတင်း/အသံဖိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်မြို့သို့ ယနေ့ သွားရောက်ပြီး ဒေသခံလူထုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံများ – Messenger သတင်းဂျာနယ်၊ အသံဖိုင် – DVB
Burmese can use VoIP – အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ ဟု ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ Internet Journal ကောက်နုတ်ချက်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍ နိုင်ငံခြားသို့...
Page 245 of 245«1...241242243244245